Sidee Loo Fududeeyaa Maqaal-Aqoon-aasaasi ah | Martech Zone
Sida Loo Tayeysto Qodobka Aqoonta-Saldhiga
Axad, Maarso 12, 2017 Khamiis, Juun 29, 2017 Douglas Karr
In kasta oo maqaal ama baloog dhejis uu u qulqulayo sida sheeko gaaban, booqdayaasha raadinaya macluumaadka waxay jecel yihiin inay arkaan macluumaadkaas oo loo qaabeeyey qaab joogto ah. Akhristaha maqaalku wuxuu si taxaddar leh u akhrin karaa eray kasta, sadar kasta, iyo sadar kasta. Si kastaba ha noqotee, booqdaha doonaya aqoonta wuxuu jeclaan lahaa inuu si dhakhso leh u sawiro bogga oo uu si toos ah ugu boodo macluumaadka ay isku dayayaan inay helaan ama wax badan ka ogaadaan.
Abuuritaanka saldhig aqooneed oo dilaa ah ma noqon karo mid galmo leh, laakiin waxay aadi doontaa waddo dheer oo loo maro ka caawinta macaamiishaada lacagta bixinaysa inay wax badan ka helaan wax soo saarkaaga. Iyo qiimaha badan ee aad siin karto macaamiishaada, ayay u badan tahay inay noqdaan macaamiil soo laabasho ah. Colin Newcomer, HeroThemes
Colin Newcomer wuxuu soo saaray maqaal cajiib ah, The Ultimate Mawduuca Saldhigga Aqoonta, oo ay la socdaan infographic hoose. Waxaan rabay inaan xoogaa yar ku wareego mowduuca oo aan la hadlo sida aad ugu fiicnaan laheyd maqaalka aasaasiga ah ee aqoonta si aad u soo jiidato akhristayaasha iyo matoorada raadinta. Waa kuwan talooyinkaygu oo la jaan qaadaya Colin's:
Title - Isticmaalayaasha mashiinka raadinta badanaa waxay isticmaalaan su'aalaha dhabta ah sida sida loo, waxa, iwm. Waxaan ku habboonayn lahaa cinwaanka Colin ee ku jira 'infographic to' Sida loo qoro Qodobka Saldhigga Aqoonta Waxtarka leh.
dixiri jilicsan - nidaamyo badan oo maaraynta maareynta ayaa ka saaraya ereyada sida ilaa or is. Waxaad ubaahan doontaa inaad haysato kuwa kujira maqaalkaaga permalink slug sidaa darteed waxay u dhigmaysaa raadinta si dhow. Taasi waxay kordhin doontaa qiimaha-guji-marinka bogga natiijooyinka mashiinka raadinta.
Ka bilow Dhibaatada - oo aan la bilaabayo dhibaatada, waxaan sidoo kale hubin lahaa inaad dejiso rajooyin ku saabsan waxa aad ku baran doonto ama aad ku ogaan doonto maqaalka aqoonta-aasaasiga ah. Tusaale ahaan, qodobkan, waxaad baran doontaa walxaha loo baahan yahay in lagu qoro maqaal wax ku ool ah oo aqoon-aasaasi ah, talooyin ku saabsan sida loo qoro maqaalka aqoonta-aasaasiga ah, iyo sida loogu habbooneeyo raadinta.
Kudar Jadwalka Mawduucyada Maqaallada Dheer - Xitaa uma maleynayo inay fikrad xun tahay in dhibco boodbooyin loo qoro maqaallada gaagaaban si dadka isticmaala ay si toos ah ugu boodaan macluumaadka ay raadinayaan.
Mawduucyada Isku-xidhka - xiriiri qormooyinka qoto dheer laakiin hubi in akhristayaashaada ay horay iyo gadaal u mari karaan. Breadcrumbs waa hab qurux badan oo tan lagu sameeyo.
U Isticmaal Tilmaamaha Tallaabada Tilmaamaha - laakiin ku soo koobo tallaabada cinwaan geesinimo leh sida uu Colin ku sameeyay faahfaahintiisa!
Ku Jabi Mawduuca cinwaankiisa - kuwani waa dhibcaha boodka ee aad u isticmaali lahayd lambarka 3.
Isticmaal Sawirro Go'aan Sare si loo muujiyo Hawsha - oo ay weheliyaan sawirro taxane ah, isticmaal fiidiyow qabashada shaashadda ama sida loo duubo fiidiyowga ay booqdayaashaadu daawan karaan.
Ku Sii Macluumaad Dheeraad ah Asad iyo Sanduuqyada Macluumaadka - talooyinka, qoraalada, soo dejinta, digniinta, iyo macluumaadka kale waa wax weyn in looga dhigo akhristayaashaada.
Sii Mawduuca Jump Off with Articles Related - hab fiican oo loogu talagalay dadka soo dagaya si ay ugu wareegaan macluumaadka ay runti raadinayeen results natiijooyinka raadinta had iyo jeer ma fiicna!
Hadda u gudub maqaalka Colin si aad u aqriso talooyin qoto dheer oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah talooyinkiisa ku jira HeroThemes infographic:
Tags: mawduucyada geesigasida lookbsaldhiga cilmigaHagaajintatayadoodiiSEO
Shabakadaadu ma uhadashaa sida Amazon oo kale?
Maxay Suuqyayaashu Ugu Baahan Yihiin CMS Qalabkooda Sannadkan